East African Community inotanga itsva intra-regional tourism drive
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » East African Community inotanga itsva intra-regional tourism drive
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • Sustainability News • Tanzania Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
East African Community inotanga intra-regional tourism drive
Mushandirapamwe uyu uchaitwa kwemavhiki matatu, kubva musi wa1 Zvita 2021. Ichi chikamu chekushandiswa kweEAC Tourism Marketing Strategy uye EAC Recovery Plan ichitsigirwa neGerman Development Agency, GIZ.
The Nharaunda yeEast Africa (EAC) yakatanga EAC Dunhu neDomestic Tourism Media Campaign yakagadzirirwa kushambadza nzvimbo nesevhisi dzedunhu nedzedunhu, nechinangwa chekusimudzira nekuvandudza mafambiro emudunhu.
Chakaparurwa svondo rino, chirongwa che “Tembea Nyumbani”, kana kuti “Visit Home” chiri kuda kukwezva zvizvarwa zveEast Africa kuti vafambe munyika dzavo, vozotenderera nedunhu, mukuyedza kumutsiridza kushanya kwemunyika nematunhu mudunhu reEast Africa. dambudziko reCOVID-19.
Mushandirapamwe uyu uchaitwa kwemavhiki matatu, kubva musi waZvita 1, 2021. Ichi chikamu chekushandiswa kweEAC Tourism Marketing Strategy uye EAC Recovery Plan inotsigirwa ne German Development Agency, GIZ.
EAC Secretariat yakatanga chirongwa ichi pamuzinda wayo kuNorthern Tanzania guta revashanyi reArusha.
Kushanya kunobatsira zvakanyanya kuhupfumi hweEAC Partner States uye pre-denda, vakapa gumi muzana yeGross Domestic Product (GDP), 10% mihoro yekunze uye 17% mukugadzira mabasa.
Denda reCOVID-19 rakaona chikamu ichi chichikanganisika nekusvika kwekushanya kwepasirese mukati East Africa kudonha nechikamu che67.7%, kusvika kune vanosvika mamirioni mazana maviri nemakumi maviri neshanu muna 2.25 zvichienzaniswa ne2020 miriyoni muna 6.98.
EAC Munyori mukuru, Dr. Peter Mathuki, vakurudzira vatambi vemasangano akazvimirira ega ekushanyirwa kwenyika kuti vatengesere vanhu vekuEast Africa mari dzavanotenga kuitira kuti vanyengetedze kutora mukana wezvinenge zvapihwa panguva yezororo iri.
"Nemubhadharo wekupinda uye mitero yakawedzerwa kuvagari veEAC, yave nguva yekuti vagari vekuEast Africa vaongorore tsika dzakasiyana, kutora mafambiro erwendo uye kushanyira mahombekombe egungwa pakati pemimwe mikana inowanikwa mudunhu iri", Dr. Mathuki vakadaro panhepfenyuro. kutanga kwaitwa pamuzinda weEAC muArusha pakati pesvondo rino.
Dr. Mathuki vakatsinhirawo kudaro EAC yakagadzira EAC Pass inobatanidza nekusimbisa bvunzo dzeCCIDID-19 uye zvitupa zvekudzivirira zveEAC Partner States kuti kurerutsira kufamba mudunhu rese.
Chirongwa cheTembea Nyumbani chiri kuitwa neEAC ichishanda neEast Africa Tourism Platform inomirira mabhizimisi ezvekushanya mudunhu rose.
Kuburikidza nemushandirapamwe uyu, varidzi vemahotera nevamwe vanopa mabasa ekushanyirwa kwenyika vari kukurudzirwa kuti vashambadzire mapasuru anotengeka kuvagari veEAC.
Kudivi ravo, mukuru weEAC anoona nezveProductive Sectors, VaJean Baptiste Havugimana vakati EAC iri kuyedza kuona kuti Single Tourist Visa yatambirwa neEAC Partner States dzese.
“Bazi reSectoral Council on Tourism and Wildlife Management pamusangano wavo wakaitwa muna Chikunguru gore rino rakakurudzira kuti Secretariat iite musangano wemasectoral unosanganisira mapazi akakosha akaita seTourism and Wildlife, Immigration and Security kuti vagadzirise hwaro hwekuparura chirongwa ichi. Single Tourist Visa nenyika dzese dzePartner States,” akadaro.
VaHavugimana vaona kuti musangano uyu uchaitwa kutanga kwa2022, vachiti kana Visa yatambirwa zvizere zvicharerutsira vashanyi vanobva kunze kwenyika mudunhu rose.
Zvakare, Mukuru weEAC Tourism Officer, VaSimon Kiarie, vakati EAC inoronga kuti nekuedza kushanya kwakakasharara mumatunhu nemunyika; dunhu richakwanisa kugamuchira vashanyi vangangosvika mamirioni mana mugore rinouya.
“Bazi rezvekushanyirwa kwenyika rave padanho repamusoro uye tinotarisira kuti panosvika gore ra2024, tichange tagamuchira vashanyi vanosvika mamirioni manomwe kana zvichienzaniswa ne7 miriyoni vashanyi vakarekodhwa muna 2.25”, vakadaro.